Ewepu ajị n'ụlọ
ị bụ ebe a: Home Isi Care Ewepu ajị n'ụlọ
Ọ bụla-akwanyere onwe nwaanyị kwesịrị mgbe niile anya ka ha sowe ha.
Na-achọghị ntutu na ozu ndị a nnukwu nsogbu na nke a,. Dozie ya n'ụzọ ọ bụla i nwere ike. Ihe kacha mfe na kasị enweghi mgbu - Shaver. Otú ọ dị, usoro a ga na-arụ ọrụ a ụbọchị ma ọ bụ abụọ. Anyị na-adịghị achọ mfe ụzọ. Waksị - kacha mma ngwọta. Oge ochie a ụzọ ịlụ Bibie nke achọghị ntutu. Cleopatra onwe ya mepụtara ya, onye na-emepụta ahụ nke ya. Onye ọ bụla n'ógbè ahụ gị, ọ na-enyo n'ime ihe na-adọrọ adọrọ na mma.
Waksị a na-akpọ waksị. Nke a bụ ihe kasị ewu ewu ụzọ ịlụ Bibie nke achọghị ntutu na-eme ka akpụkpọ ke silk. A na-eji na Ngosiputa Ngwa, ma n'ebe obibi. Waksị adịghị achọ ka a dị ịrịba ego nke oge, adabara niile ntutu isi ụdị na-enye a na-adịgide adịgide mmetụta. Na mgbe omume nke usoro, agiri nwayọọ nwayọọ hapụ ha ike, Ha na-aghọ mkpa, ìhè na-akwụsịlata ya ibu. Nke nta nke nta mbelata ha njupụta. Ndị isi ihe na-eme ihe niile ziri ezi, iji zere ọdịdị itching, nācha ọbara-ọbara na iyatesịt. mbụ ikpebi, ihe epilation mma подходит вам.
Nịm "Ewepu ajị n'ụlọ"Ị nwere ike ịzụta na a ahịa ọgwụ ahụ ma ọ bụ ịchọ mma ụlọ ahịa, a fortiori, dị otú ahụ na epilation fọrọ nke nta enweghi mgbu. Tupu usoro, ọ dị mkpa iji nwalee maka mmadụ ịsọ. Iji mee nke a, tinye obere ego nke ndị mejupụtara nke ekwe aka na-ahapụ maka 10 min. Ọ bụrụ na allergies na-adịghị, aga n'ihu. N'ụzọ bụ isi, ikpa e kwesịrị a disinfectant. N'elu na ị pụrụ itinye a obere nwa powder. Ọ dịghị ihe na-okokụre arọ na slide na ntutu. Mgbe ahụ gbazee wax, -enye ya obere jụụ, ma jiri nlezianya na etinyere ntutu na akpụkpọ ya a mkpa oyi akwa. Efrata, nke bụ akụkụ nke wax, banye n'ime ofụri ntutu follicle ruo, envelop ya na ifriizi. N'elu nke uka nke mama warara ákwà, nkenke ahapụ. Mgbe ikpeazụ hardening mberede obi ike ije mkpa dọwara a warara "megide ọka". Stilled ntutu na-wetara ọnụ na wax.
Ọ bụrụ na a ole na ole ntutu ka na-ekpe, ha ga-dọpụtaara na tuwizas. Retesting waksị na otu ụbọchị on mpaghara ebe a nke anụ nwere ike ime ka oké iyatesịt.
wax fọduru nwere ike wepụrụ na a keguru mmiri ákwà. Mgbe usoro, na akpụkpọ dị mma na-etinye a pụrụ iche ude mmiri ma ọ bụ mmanụ oliv. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị a na saịtị ntutu ga-eto ọzọ, ma site na oge ọ ga-ewe 3-5 izu. Ọ niile na-adabere na onye. Special ntecha nwere ike igbochi omume nke ingrown ntutu, na adịghị eto ngwa ngwa. Adịla na-eleghara ha.
M ga-asị, na ewepu ajị wax - a kama egbu mgbu, nke bụ adabara ndị mmadụ na hypersensitive. Ọ bụrụ na naanị clench ezé gị na-atachi obi. Nnọọ obere ntutu (2-5 mm) ka usoro a dịghị dabara. Ha dị nnọọ adịghị sere. Ya mere, Anyị ga-echere, mgbe ntutu isi ka nke ukwuu ogologo. ọtụtụ, mgbe
usoro, na saịtị nke mbụ ntutu iyi red ntụpọ. Kwadebe na-, ha nwere ike na-apụ n'anya site 2-3 ụbọchị.
Na mgbakwunye na nke niile dị n'elu, ewepu ajị nwere ọtụtụ contraindications:
A) -arịa ọrịa shuga mellitus. Mgbe ọrịa mebiri emebi akpụkpọ agwọ nwayọọ nwayọọ , Ọ enwekwu ihe ize ndụ nke septic nsogbu.
The) nfụkasị Jeremaya.
T) afọ ime.
D) akpụkpọ etuto ahụ (birthmarks, akpụkpa n'ahụ).
Hair mwepụ bikini n'ụlọ
Sere nke iku anya n'ụlọ